Luke Shaw Oo Ka Jawaabay Naanaysta Loo Bixiyey Ee 'Shawberto Carlos' Iyo In La Barbar-dhigo Roberto Carlos - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLuke Shaw Oo Ka Jawaabay Naanaysta Loo Bixiyey Ee ‘Shawberto Carlos’ Iyo In La Barbar-dhigo Roberto Carlos
Luke Shaw Oo Ka Jawaabay Naanaysta Loo Bixiyey Ee ‘Shawberto Carlos’ Iyo In La Barbar-dhigo Roberto Carlos
Difaaca Manchester United ee Luke Shaw ayaa sheegay in aan marnaba lala barbar-dhigi karin halyeygii Brazil ee Roberto Carlos, kaas oo ay taageereyaashu gaadhsiiyeen heer ay isbarbar-dhig ku sameeyaan.
25 jirkan reer England ayaa qaab ciyaareed cajiib ah muujinaya xilli ciyaareedkan, isagoo is-xaqiijiyey in uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu fiican ee booskaas ka dheela waqtigan.
Bandhiggii uu sameeyey ciyaartii Tottenham ee toddobaadkan, ayaa waxay ahayd mid heerkeedu sarreeyo, isagoo muujiyey in hadda uun ay kubaddiisu qaan-gaadhay.
Sannadkii 2015kii oo uu dhaawac jabniin ah lugta kasoo gaadhay Shaw, ayaa waxa hantaaqmay koritankiisii xirfadeed, waxaana kaddib weeraray tababare Jose Mourinho oo geliyey kaydka Manchester United, laakiin ciyaartii toddobaadkan uu ka hor-tegay Spurs oo uu Jose hoggaaminayo, waxa uu ahaa sirtii guusha keentay.
Taageereyaasha Manchester United ayaa ciyaartaas kaddib, waxay u bixiyeen naanays cusub oo ah ‘Shawberto Carlos’, iyagoo barbar-dhigay xiddiga hore ee reer Brazil ee Roberto Carlos.
Laacibkan oo su’aalo laga weydiinayay shabakadda ManUtd.com, ayaa waxa uu ka hadlay barbar-dhigga Roberto Carlos, waxaanu yidhi: “Haddii aan si daacad ah u hadlo, waxyaabaha qaarkood aan mararka qaarkood ku arko baraha bulshada iyo sheekaysiga amaba ay ciyaartoyda kooxdu iisoo diraan, way iga qosliyaan.
“Aniga la ima barbar-dhigi karo Roberto Carlos, sababtoo ah wuxuu ahaa ciyaartoy aan la rumaysan karin.”
Luke Shaw waxa uu sheegay in uu ogyahay in xataa taageereyaashu ay ku naanaysaan ‘Shawberto Carlos’, waxaanu yidhi: “Waan ka war hayaa in magaciisa la igu ladho, waanan ku qoslaa.”
Intaa kaddib, waxa uu doortay difaacii bidix ee ugu wanaagsanaa, kaas oo uu ka dhigay Ashley Cole, isagoo yidhi: “Marka aan xasuusto yaraantaydii, waxa aan inta badan daawan jiray Ashley Cole, waxaanan doonayay in aan sidiisa oo kale noqdo. Haddii la weydiiyo ciyaartoyga aan noqon lahaa, waxaan odhan lahaa Ashley Cole oo ah kii ugu fiicnaa.”